Tag: email akpaaka | Martech Zone
Mkpado: akpaaka email
Tọzdee, Eprel 12, 2018 Sunday, Eprel 15, 2018 Douglas Karr
Enwere ọtụtụ oge ebe ndị nnọchi anya ire ahịa nwere nnukwu ndepụta, mana mbọ achọrọ iji zipu ozi-e n'otu oge na-ewe nnukwu mbọ. AutoPitch jikọtara ya na email gị, na-enyere templating aka, wee kọọ akụkọ ọ bụla na mmemme ọ bụla gbasara ozi ịntanetị ndị ahụ. Cannwere ike ịtọzigharị usoro izipu na ndepụta gị. Dọrọ ndepụta ndu oyi n'ime ikpo okwu email nwere ike ịnweta ụlọ ọrụ obere ntakịrị
Na Mọnde, Nọmba 24, 2015 Monday, November 23, 2015 Douglas Karr
Anyị bụ ndị nnukwu Fans nke ozi ịntanetị akpaaka. Ndị ụlọ ọrụ anaghị enwekarị ego iji metụ atụmanya ọ bụla ma ọ bụ ndị ahịa aka ugboro ugboro, yabụ ozi ịntanetị akpaaka nwere ike inwe mmetụta dị egwu na ikike gị iji kwurịta okwu ma zụlite ma ndị ndu gị na ndị ahịa gị. Emma mere a kediegwu ọrụ Anam Udeme ọnụ a infographic na n'elu 5 kasị dị irè akpaghị aka ozi ịntanetị izipu. Ọ bụrụ n’ị nọ n’egwuregwu ịzụ ahịa, ị maraworị na akpaaka bụ
Ahịa Email akpaaka na fectdị irè ya
Fraịdee, Nọvemba 13, 2015 Douglas Karr
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na anyị nwere mmemme mmiri ọkụ na inbound marketing ị nwere ike ịdebanye aha na saịtị anyị (chọọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ). Nsonaazụ nke mgbasa ozi ahịa email a na-akpaghị aka bụ ihe ịtụnanya - karịa ndị debanyere aha 3,000 abanyela aka na ndị na-edeghị aha. Anyị enweghị ọbụna ịtụgharị ozi ịntanetị na email HTML mara mma ma (ọ dị na ndepụta nke ihe ị ga-eme). Email na-akpaghị aka bụ n'ezie